Posted on November 3, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 92 Views
ShareTweetPin14shares१४ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले १४ सहसचिवहरुको काज सरुवा गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ तथा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयमा कार्यरत सहसचिवहरुको सरुवा गरेको हो । सरुवा भएकाहरुलाई रमाना पत्रसमेत दिइसकिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । हेर्नुहोस् को-कहाँ सरुवा भए ? क्रम संख्या नाम थर पहिले अहिले १. प्रदीप राज कँडेल विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
ShareTweetPin11sharesअसोज २५, काठमाडौँ । गोंगबु बसपार्क पुगेका अर्घाखाँचीका सयौज पोख्रेल टिकट काउन्टरमा पुग्नुभयो । अर्घाखाँची सन्धीखर्कका लागि टिकट दिनुस् भनेर काउन्टरका कर्मचारीसँग टिकट माग्नुभयो । काउन्टरका कर्मचारीले भने– ‘२७ गतेको टिकट प्याक छ । बिहानै आउनुहोला । गाडी थप गर्छौं ।’ अन्ततः सयौज टिकट नै नलिई रित्तै हात फर्किनुभयो । घर जान टिकट लिन बसपार्क पुगेका विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…